Mogadishu Journal » Nabadoon xalay lagu dilay magaalada Muqdisho
Nabadoon xalay lagu dilay magaalada Muqdisho
Mjournal :-Dabley ka tirsan Al-Shabaab ayaa galabta Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ku toogatay Mid ka mida Odayaashii soo xulay Xildhibaanada Baarlamaanka kaasoo magaciisa lagusoo gaabiyay Xasan Jaciir sida lagu sheegay war caawa kooxdan ay soo saartay.
Al-shabaab ayaa intaa ku dartay in Xasan Jaciir uu ahaa Oday dhaqameed sanaddihii lasoo dhaafay magaalada Jowhar uga qeyb galayay fadhiyadii lagusoo xulayay xildhibaanada Baarlamaanka dowlada federaalka ee laga soo doortay maamulka Hirshabeelle.
Warka ka soo baxay al-shabaab uu lagu daabacay baraha internetka ee taageera ayaa lagu sheegay in sidoo kale Xasan Jaciir uu mudooyinkii dambe ku howlanaa diyaarinta rag ilaalo u noqda Xildhibaanad Qamar Faarax Dhagaweyne oo ka tirsan Baarlamanka Federaalka.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka lagu dilay Xasan Jaciir, mana jiro war ka soo baxay saraakiisha amaanka dowlada Somalia oo ku saabsan dilkan oday dhaqameedkan.
Soomaaliland oo sheegtay in ay xirtay dhamaan xudduudaheeda
Soomaaliland oo saakay doorasho loo dareeray